Dɛn Nti na Yɛyɛ Bɔne? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuaeɛ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Dɛn nti na yɛyɛ bɔne?
Hwan na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛma yesu ayɛ bɔne?—Mateo 4:8-10
Onipa biara pɛ sɛ ɔne afoforo tena asomdwoe mu, ɔdi nokware, na ɔyi ne yam boa afoforo. Ɛnde, dɛn nti na awudisɛm, nsisi ne atirimɔdensɛm abu so saa? Nsɛm a ani yɛ nyan sisi daa. Adɛn, obi na ɔrepiapia nkurɔfo ma wɔreyɛ nneɛma bɔne saa anaa?—Kenkan 1 Yohane 5:19.
Onyankopɔn de bɔne bɔɔ nnipa anaa? Dabi, Yehowa Nyankopɔn bɔɔ nnipa wɔ ne suban so, enti na wɔbɛtumi asuasua Onyankopɔn dɔ no. (Genesis 1:27; Hiob 34:10) Nanso Onyankopɔn dii yɛn ni, na ɔmaa yɛn hokwan sɛ yɛmpaw nea yɛpɛ. Bere a yɛn awofo a wɔdi kan no de hokwan a wɔwɔ no yɛɛ bɔne no, wɔansuasua Onyankopɔn enti wɔbɛyɛɛ abɔnefo. Wɔde bɔne no woo yɛn, ɛno nti na yɛyɛ bɔne.—Kenkan Deuteronomium 32:4, 5.
Enti yɛbɛkɔ so ara ayɛ abɔnefo?
Onyankopɔn pɛ sɛ yɛko tia bɔne. (Mmebusɛm 27:11) Enti ɔkyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛtwe yɛn ho afiri bɔne ho, ne nea yɛyɛ a yɛbɛnya anigye ankasa. Nanso seesei deɛ, yɛrentumi nsuasua Onyankopɔn dɔ no pɛpɛɛpɛ.—Kenkan Dwom 32:8.
Ɛwom sɛ ɛnnɛ bɔne abu so deɛ, nanso nea enti a Onyankopɔn ama ho kwan bere tiaa bi mu ne sɛ, ɔpɛ sɛ obiara hu awerɛhosɛm a bɔne akɔfa aba no. (2 Petro 3:7-9) Ɛrenkyɛ koraa nnipa a wɔwɔ anigye a wɔtie Onyankopɔn asɛm nko ara na wɔbɛhyɛ asase so mã.—Kenkan Dwom 37:9-11.